Stephen King Biography na Akwụkwọ kacha mma | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Berkwụ Alberto | | Ndị edemede, Genres, Akwụkwọ, Akwụkwọ, oké ụjọ
Echere na "Eze nke ụjọ," Stephen King (Portland, Maine, 1947) bụ otu n'ime ndị edemede kachasị mma na narị afọ nke XNUMX. Na ere ihe karịrị 350 nde akwụkwọ, onye edemede nke Carrie or The Shining nwere ndu dika nmebi iwu dika nke akuko banyere akwukwo mere ya ihe ngosi nke akwukwo nke di ugbua. Anyị na-akwọ ụgbọ ke Stephen King biography na akwụkwọ kacha mma.
1 Stephen King Biography
2 Akwụkwọ kacha mma Stephen King
2.3 Ihe na-egbukepụ egbukepụ
Amụrụ n’ime ezinaụlọ akara maka mgbahapụ nke nna ya mgbe ọ dị naanị afọ abụọ, Stephen King tolitere na nwanne ya nwoke David na nne ya Ruth na Maine, Indiana ma ọ bụ Connecticut. Ọnọdụ ezinụlọ, nke tara nnukwu nsogbu ego, ghọrọ ọnọdụ zuru oke maka nwatakịrị izu ike Ọ malitere ide akụkọ sitere na nwata wee reere ha ụmụ klas ya dịka akụkọ. Ihe omume nke ụfọdụ ndị nkuzi na-adịghị amasị nke mere ka ọ weghachi ego ọ rụpụtara.
Mgbanwe nke King King na akwụkwọ egwu mere mgbe ọ dị afọ 13, mgbe ọ chọtara igbe akwụkwọ akụkọ egwu nke nna ya. Site n'oge ahụ gawa ọ malitere ide akụkọ akụkọ sayensị dị iche iche dị mkpirikpi o zigara na magazin dị iche iche. Agbanyeghị, ọtụtụ mbipụta mechara jụ ihe odide ya ruo mgbe In a Half-World of Terror, nke e bipụtara na magazin Comics Review, ghọrọ akpa katuunu ya wepụtara site na akwụkwọ gọọmentị na 1965.
Otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ malitere ịmụ Art na Bekee na Mahadum Maine ka ọ na-arụ ọrụ nwa oge iji kwụọ ụgwọ maka ọmụmụ ya ma nyere nne ya aka n'ụzọ ego. Akụkọ dị iche iche pụtara na afọ ndị a, dị ka The Crusher or the Damned Highway.
Na 1971, afọ nke o jisiri gụsịrị akwụkwọ, onye edemede ahụ lụrụ onye edemede bụ Tabita King, onye ọ zutere na Mahadum. Nzute akara aka na-eche na ọ bụ Tabitha napụtara site na ahịhịa ọrụ di ya aha ya bụ Carrie tụfuru ịgba gị ume ka ị rụchaa ya. King amaghi na mgbe o nyesịrị ya ihe odide ahụ n'aka onye nkwusa Doubleday na ya ga-enweta mbipụta akwụkwọ akwụ ụgwọ maka $ 2.500 tupu oge eruo. Onu ogugu riri elu na $ 400.000 site na ire nke ikike na akwukwo.
Ihe ịga nke ọma Eze rutere dabara ọtụtụ nsogbu ya na mmanya na ọgwụ ọjọọ, riri ahụ gosipụtara na edemede dịka Jack Torrance, onye edemede bụ isi nke Shining (1977). N'ụzọ dị mwute, onye edemede ahụ kpebiri ime mkpocha mkpokọta na 80s.
Na ọrụ dika The Mystery of Salem's Lost (1975), The Dance of Death (1978), The Dead Zone (1979), Cujo (1981), Animal Cemetery (1983), It (1986) ma ọ bụ Misery (1987), Stephen Eze nwere ike ịnya isi na otu n'ime ọrụ ọgụgụ siri ike nke ọgbọ ya, n'ihi na na mgbakwunye na nde nde nde akwụkwọ ọgụgụ ya, ọtụtụ n'ime ha Carrie, Na-enwu, Nhụjuanya, Mkpọrọ Ndụ ma ọ bụ ihe na-adịbeghị anya Ọ ghọrọ nnukwu ihe nkiri.
Ọrụ buru ibu nke mebiri mgbe, n'oge ọkọchị nke afọ 1999, ụgbọ ala kụrụ Eze wee mee ihe karịrị ọrụ iri. Ọnwụ nke ike dugara ya n'ibelata ederede nke ọrụ ya ma jikọta ọrụ ya dị ka onye edemede akụkọ ifo na kọlụm ya na Ntụrụndụ kwa izu ma ọ bụ ọrụ dị ka ide egwu na-adabere na saga ya a ma ama The Dark Tower.
Otu n'ime ndị edemede kachasị mma nke ụdị egwu ndi ikike ndia gosiputara ikike ha.
Ọ bụ ezie na anaghị ewere ya dị ka ọrụ kacha mma nke Stephen King, ihe nnọchianya nke Carrie ọ gafere agwa ya dị ka ọrụ izizi ma ọ bụ mmegharị na nnukwu ihuenyo nke gafere 1976. Ọ bụ akụkọ nke esemokwu ahụ na-aga n'ihu. nọ na crescendo nke gosipụtara otu nwata nwanyị, onye nwere ike ime ihere nke oke iwe ya na-egosi ihu abụọ nke ọha mmadụ rụrụ arụ.
Eze akụkọ kacha ere ahịa eweputara ya na 1978 maka nkpuru di egwu na onye kacha ere ihe. Edere na 1990 wee kewaa ya na uzo ato, akuko banyere ihe nchoputa nke nje oria ojoo a bu ngwa agha nje na emecha gbasaa n’uwa nile. Ihe odide nke nkata ahụ nwere nrọ nkịtị nke nwa okorobịa na otu agadi nwanyị pụtara n'ihu ha nke na-akpali ha ịga Nebraska ịlụ ọgụ maka ihe arụ na-akpata ihe a niile. apocalipsis.
Ihe na-egbukepụ egbukepụ
Otu n'ime ọrụ ndị a kacha mara amara nke Stephen King Njirimara otu n'ime ihe odide ya kacha mara mma: Jack nhụsianya, onye edemede na-egbu egbu na-ekpebi ịkwaga nwunye ya na nwa ya nwoke na Overlock Hotel iji lekọta ya n'oge oge oyi. Ebe obibi nke oge gara aga gụnyere ụwa na ihe omume ndị ga-agbanwe nkwekọ nke ezinụlọ a na-ezughi oke. Akwụkwọ ahụ, nke e bipụtara na 1977, Stanley Kubrick mebere ya maka ihe nkiri na 1980 nke Jack Nicholson gụrụ. N'agbanyeghị ezigbo nyocha maka ihe nkiri ahụ, Eze enweghị afọ ojuju na mmegharị ahụ.
Ọ ga-amasị gị ịgụ Ihe na-egbukepụ egbukepụ?
Mgbe ihe ịga nke ọma nke ihe nkiri mmegharị wepụtara na 2017, otu n'ime 80s baajị ụjọ ụjọ a hụghachiri ọhụụ nke na-echetara anyị ihe kpatara ya It Ọ bụ otu n'ime ihe odide kachasị atụ egwu na akwụkwọ ọgụgụ. E bipụtara ya na 1986, a na-etinye akụkọ a na okpokoro oge abụọ: ngwụsị afọ ndị 50 na 1985, afọ nke otu "The Losers" laghachiri n'obodo ha, Derry, ka ha chee onye na-enweghị obi ọjọọ ihu dị ka onye ome okike bi na nsị.
Dị ka a ga - asị na ọ bụ amụma nke esemokwu nke Eze tara ahụhụ na 1999, onye protagonist nke Nhụsianya, onye na-ede akwụkwọ akụkọ ịhụnanya Paul Sheldon, onye na-ata ahụhụ ihe mberede ụgbọ ala tetara n'ụlọ Annie Wilkies, nọọsụ nke kwupụtara na ya nwere mmasị na ọrụ ya; nke mere na o kwubiri itinye uche ya n’ike nke ọrụ ọzọ nke Sheldon mikpuru na ya. Akwụkwọ ọgụgụ nke nwetakwara ebe dị egwu karị mgbe mmalite nke mmegharị ihe nkiri 1990 nke ọ bụ Kathy Bates meriri Oscar maka ezigbo omee maka ọdịdị nke ekwensu nke Annie.
Kedu ihe ị chere, akwụkwọ kacha mma Stephen King?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » oké ụjọ » Biography na akwụkwọ kacha mma nke Stephen King
Ndabere na ụdị na akwụkwọ. Ihe anyị kwuru na otu anyị si ekwu ya.
Fọdụ akụkọ ifo metụtara nkà nke ide akwụkwọ akụkọ.